West Point စဈတက်ကသိုလျကြောငျးဆငျး မွနျမာလူငယျနဲ့ မေးမွနျးခနျး
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အထင်ကရ West Point စစ်တက္ကသိုလ်ကနေ အခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဘွဲ့ရသူ (၁၁၀၇) ယောက်ထဲမှာ မြန်မာ-အမေရိကန် ဒု-ဗိုလ်အောင်မိုးလည်း ထူးထူးခြားခြား ပါဝင်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ မိသားစုနဲ့အတူအခြေချလာတဲ့ ကိုအောင်မိုး ကို အခုလိုမျိုး စစ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတယောက် ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့  ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များအထိမ်းအမှတ် အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ကိုအောင်မိုးရှင့်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ Congratulations ပါ။ အခုမှ လောလောလတ်လတ် အမေရိကန် West Point စစ်တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အရင်ဆုံး စစ်တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရတာ ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာကို ဦးစွာပြောပြပေးပါရှင့်။
ဖြေ ။ ။ မင်္ဂလာပါ။ (၄) နှစ်လုံးလုံးကြာပြီးမှ ဘွဲ့ရတော့ ပျော်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ကိုအောင်မိုးက မိသားစုနဲ့အတူ အိန္ဒိယကနေ ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာခဲ့တဲ့ အခြေအနေကနေ အခုလိုမျိုး စစ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်အောင်လို့ ဘယ်လောက်အထိ ကြိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကြိုးစားတာတော့ ကြိုးစားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများကတော့ မေမေနဲ့ဖေဖေ ကောင်းလို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအမေရိကကိုရောက်တာလဲ ကိုယ့်မိဘတွေကြောင့် ရောက်တာပါ။ အရင်တုန်းက အိန္ဒိယမှာမွေးတယ်။ အိန္ဒိယမှာပဲ (၁၄) နှစ်လောက် နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိုရောက်ဖို့ မေမေတို့က ကြိုးစားပြီးမှ UN နဲ့ဘာနဲ့ စကားပြောပြီးမှ ဒီကိုရောက်ဖို့ သူတို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ သူတို့ကောင်းလို့ပါပဲ။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ West Point ဆိုတာက တကယ့်ကို အထင်ကရ စစ်တက္ကသိုလ်ကြီးတခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးကို မလွယ်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်တောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားခဲ့ရသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျောင်းမှာတော့ အမှတ်တွေဘာတွေ ကောင်းအောင်လို့တော့ လုပ်ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အားကစားတွေ၊ ဘာတွေ ကစားရတယ်။ ပထမနှစ် High School မှာ ဘောလုံးကန်တယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်မှာတော့ Track ပြေးခုန်ပစ်လုပ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းမှာ အမှတ်တွေ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ SAT လည်း အမှတ်ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။
မေး ။ ။ စောစောကပြောသလို ကမ္ဘာ့အထင်ကရ West Point စစ်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်အနေနဲ့ တက်ခွင့်ရတာ ဘယ်လောက်ထူးခြားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်ထင်တာကတော့ အရင်စဝင်တုန်းကတော့ အဲဒါတွေ ဘာမှမကြည့်ပါဘူး။ သူတို့ကြည့်တာကတော့ အမှတ်ကောင်းလား၊ မကောင်းလား။ ဒီနိုင်ငံကို တကယ်ချစ်လား၊ မချစ်လား။ အဲဒါတွေကို ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်ပါပဲ။
မေး ။ ။ ကိုအောင်မိုးအနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ကော ဘယ်လိုခံယူသလဲ။ ကိုယ်က မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တက်ခွင့်ရတာကို ဘယ်လိုမျိုး ကိုယ့်အတွက် ထူးခြားမှုဖြစ်သလဲ။
ဖြေ ။ ။ အရမ်းပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ပိုက်ဆံလဲမပေးရဘူး။ ဘာမှလဲမလုပ်ရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီကောလိပ်ပြီးရင် စစ်တပ်ထဲမှာ (၅) နှစ် ထမ်းဆောင်ရမယ်။ အဲဒီဟာကတော့ လူတိုင်းလုပ်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာအနေနဲ့ သွားရတာတော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗမာတွေ အများကြီးမရှိဘူး။ ကျနော်တယော်ထဲပဲ။ အဲဒါပြီးတော့ ကျနော့်အထက်တန်းကျောင်းကနေ သွားတာလဲ ကျနော်တယောက်ထဲပဲ။ အရင်တုန်းကတော့ တယောက်နှစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ သင်တန်းမှာကော တခြားမြန်မာထဲက မြန်မာ-အမေရိကန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာထဲကဖြစ်ဖြစ် တွေ့ဖူးလား၊ ဆုံဖူးလားရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ဆုံဖူးပါတယ်။ ဦးသူရအောင် Major သူရအောင် သူနဲ့တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူက West Point အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒီတက္ကသိုလ် (၄) နှစ် တက်ရတဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလဲ နည်းနည်းပြောပြပေးပါအုံး။ ဘယ်လောက်အထိ သင်ရတဲ့ဟာတွေက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်အထိ ခက်ခဲသလဲ။ ကိုယ်အနေနဲ့ လိုက်နိုင်သလား။ အဲဒီအခြေအနေတွေကို ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ တော်တော်များများတော့ လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေကြရင်တော့ တချို့ ဟာတွေကတော့ ခက်တယ်။ တချို့ စာတွေက ခက်တယ်။ ပထမနွေရာသီသွားတုန်းက Training လုပ်ရတယ်။ အဲဒီတုန်းကလဲ ခက်တော့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောက်ကြီးလဲ မခက်ပါဘူး။ ကိုယ်က အားကစားတွေ ဘာတွေ လုပ်ဖူးတော့ အဲဒီလောက်ကြီး မမောပါဘူး။ တခြားမလုပ်ဘူးတဲ့ လူတွေလောက်တော့ မမောပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာ နည်းနည်းချမ်းပါတယ်။ အဲဒီအခါတော့ ကျနော်က နည်းနည်းပိန်တယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ ပိုချမ်းတယ်။ အဲဒီတခုတည်းပါပဲ မိုးရွာတာကိုတော့ မကြိုက်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းကိစ္စမှာတော့ တော်တော်များများ လိုက်နိုင်ပါတယ်။ မလိုက်နိုင်တာရှိရင်လဲ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ကူပေးတယ်။ ဒီကျောင်းက အဲဒီအတွက်ကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာ လူက (၁၅) ယောက်လောက်အထိ မကျော်ဘူး။ အဲဒီအတွက် သူတို့ဘာသာသူတို့ ကောင်းကောင်း တယောက်နဲ့တယောက် စကားပြောလို့ရတယ်။ သူတို့ ကူညီပေးတယ်။ ကိုယ်မသိတာရှိခဲ့ရင်။
မေး ။ ။ နောက်တခုကတော့ ကိုယ်က မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်အသားအရောင်ကြောင့် သင်တန်းမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေ ကြုံဖူးပါလား။
ဖြေ ။ ။ တခါမှ မကြုံဖူးပါဘူး။
မေး ။ ။ နောက်တခုကတော့ ဒီသင်တန်းတက်တာ (၄) နှစ် စစ်တက္ကသိုလ် တက်ရတာ - အဲဒီ (၄) နှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် အမှတ်ရစရာ အဖြစ်ဆုံး ပြောပြချင်တာ ဘာရှိပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူတို့ကြောင့် ကျနော်က ဒီလေးနှစ်လုံးလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားခဲ့ရတယ်။ ပထမနှစ်ရောက်ပြီးတော့ လက်ဝှေ့ထိုးတယ်။ လက်ဝှေ့သင်တန်းမှာ ပါတယ်ဆိုတော့ သူတို့နဲ့ အမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်။ အဲဒါဆို ကျနော်တို့ Boxing လက်ဝှေ့က တနင်္လာနေ့က စနေနေ့အထိ အမြဲတမ်း လေ့ကျင့်ကြတယ်ဆိုတော့ သူတို့နဲ့ အမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်။ သူတိုိ့နဲ့ အမြဲတမ်းခင်နေတယ်။ အဲဒါဆိုတော့ အဲဒီအချိန်လေးမှာပဲ ကိုယ်က ပျော်စရာရှိတာပေါ့။
မေး ။ ။ စစ်သင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာ မလွယ်ဘူးဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး အစကနေအဆုံးအထိ ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ကိုယ်က စိတ်ဓါတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အောင်မြင်သွားဖို့အတွက် ပြီးသွားဖို့အတွက် ဘာအရေးကြီးဆုံး လိုအပ်တယ်လို့ ကိုအောင်မိုးအနေနဲ့ ပြောချင်ပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ ကိုယ့်နဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့။ ကျနော့်အတွက်ကတော့ ကိုယ့်မိဘတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားချင်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းအောင် လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီအရာတွေနဲ့ပဲ သွားခဲ့တာပါ။
မေး ။ ။ ကိုယ်က ဒုက္ခသည်ဘဝကနေ လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ background နဲ့ကော ဆိုင်သလား။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခဏလေး အေးတယ်ချမ်းတယ်ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘဝမှာ တခြားဟာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေ ဖြစ်ခဲ့တာ ငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ ဘာမှကြောက်နေစရာ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ တခုခု မကောင်းတာဖြစ်ရင် ခဏလေးပဲ။ တရက်နှစ်ရက်ပြီးသွားရင် ပြီးသွားပြီ။ The next day isanew day.
မေး ။ ။ ဒီနှစ်က တော်တော်လေး ထူးခြားတဲ့နှစ်။ Graduation Ceremony ဘွဲ့ပေးတဲ့ အခမ်းအနားက Covid ကြောင့်မို့ မိသားစုတွေ မတက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့။ အကုန်လုံး Online ကနေ ကြည့်ရတယ်။ ကိုအောင်မိုးတို့ဆိုလဲ အရင်တုန်းကလို တယောက်နဲ့တယောက် နီးနီးကပ်ကပ်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံနေရတာ မဟုတ်ဘူး။ ခုံခွဲထိုင်ရတာအစ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အဲဒါကော ဘယ်လောက် ကိုယ့်အတွက် အမှတ်ရစရာ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောချင်လဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကိုယ့်မိဘတွေ၊ ကိုယ့်ညီမလေးတို့ မပါတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့။ သူတို့အတွက် ကိုယ်က လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ အဲဒါတော့ တခုမကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို နောက်ဆုံးတခေါက် တွေ့ခွင့်ရတာတော့ ပျော်ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံးတခေါက် တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတာ …
ဖြေ ။ ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုပြီးသွားရင် တချို့ လူတွေက ဘယ်တော့မှ တွေ့ခွင့်ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ ကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့လူတွေက Christmas Break တို့ ဘာတို့ကို ချိန်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် အလုပ်ရှုပ်နေမှာဆိုတော့ တခါတလေကြရင် မတွေ့တော့ဘူးပေါ့။
မေး ။ ။ ဘွဲ့ယူတဲ့အခမ်းအနားမှာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က သူမိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။ သူမိန့််ခွန်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာ ကိုယ့်အတွက် မှတ်မှတ်ထင်ထင် ကျန်နေတဲ့ စကား ဘာရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အမေရိကန်စစ်သားက ပထမကမ္ဘာစစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွေမှာ တကယ်ပါခဲ့တယ်။ The American soldiers have been central to most of the wars. They have been fighting foralong time. အမေရိကန်စစ်သားတွေက ကြာခဲ့ပြီး စစ်တိုက်လာခဲ့တာ။ ကျနော်တို့က မျိုးဆက်သစ်တွေ new blood ဆိုတော့ သူတို့ရှေ့ က ကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာတွေကို ကိုယ်က ပိုကောင်းအောင်ဆက်ပြီးတော့ လက်ဆင့်ကမ်းယူသွားရမယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံးမေးချင်တာက ကိုအောင်မိုးအနေနဲ့ စစ်သားကောင်းတယောက်၊ စစ်မှုထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက်က ဘယ်လိုမျိုး ကျင့်ဝတ်တွေကို ကျင့်သုံးရမယ်လို့ ခံယူထားပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ ကျောင်းကဆရာတွေ သင်ပေးတာတွေက ပထမဦးဆုံး Infantry Officer တယောက်အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး လိုတာကတော့ Fitness ကြံ့ခိုင်ရမယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်ရမယ်။ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်ရမယ်။ အားကစားတွေ ဘာတွေကတော့ အမြဲလုပ်နေရမှာပေါ့။ ပြေးတာတွေ အမြဲပြေးနေရမယ်။ ဝိတ်မတာတွေ အမြဲတမ်း လုပ်နေရမယ်။ ဒါပေမဲ့ the most important thing အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့ အောက်က ကိုယ်နဲ့အတူတူ လုပ်နေတဲ့ လူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုယ်ကကြည့်နေရမယ်။ တနေရာသွားရင် သူတို့အတွက် ထမင်းစားစရာ ရှိလား၊ မရှိလား၊ အဝတ်အစားတွေ၊ အိပ်ဖို့ခေါင်းအုံပါလား မပါလား။ အကုန်လုံး စစ်နေရမယ်။ သူတို့အတွက်ပဲ ကိုယ်က လုပ်နေရမယ်၊ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှမပါပါဘူး။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ ရှေ့ ကနေ ဦးဆောင်ပေးဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောချင်တာပေါ့။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။
မေး ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ။
အမရေိကနျနိုငျငံမှာရှိတဲ့ အထငျကရ West Point စဈတက်ကသိုလျကနေ အခု ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဘှဲ့ရသူ (၁၁၀၇) ယောကျထဲမှာ မွနျမာ-အမရေိကနျ ဒု-ဗိုလျအောငျမိုးလညျး ထူးထူးခွားခွား ပါဝငျပါတယျ။ ဒုက်ခသညျအနနေဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံကနေ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ မိသားစုနဲ့အတူအခွခေလြာတဲ့ ကိုအောငျမိုး ကို အခုလိုမြိုး စဈတက်ကသိုလျဘှဲ့ရတယောကျ ဖွဈလာအောငျ ဘယျလိုမြိုးကွိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။ VOA မွနျမာပိုငျးရဲ့ ကမ်ဘာ့ဒုက်ခသညျမြားအထိမျးအမှတျ အထူးအစီအစဉျအဖွဈ တငျဆကျထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မင်ျဂလာပါ ကိုအောငျမိုးရှငျ့။ VOA မွနျမာပိုငျးအစီအစဉျက ကွိုဆိုပါတယျ။ ပထမဦးဆုံးပွောခငျြတာကတော့ Congratulations ပါ။ အခုမှ လောလောလတျလတျ အမရေိကနျ West Point စဈတက်ကသိုလျကနေ ဘှဲ့ရတယောကျဖွဈတယျဆိုတော့ အရငျဆုံး စဈတက်ကသိုလျက ဘှဲ့ရတာ ဘယျလိုခံစားရသလဲဆိုတာကို ဦးစှာပွောပွပေးပါရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ မင်ျဂလာပါ။ (၄) နှဈလုံးလုံးကွာပွီးမှ ဘှဲ့ရတော့ ပြျောပါတယျ။
မေး ။ ။ ကိုအောငျမိုးက မိသားစုနဲ့အတူ အိန်ဒိယကနေ ဒုက်ခသညျအနနေဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုကို ပွောငျးရှအေ့ခွခေလြာခဲ့တဲ့ အခွအေနကေနေ အခုလိုမြိုး စဈတက်ကသိုလျဘှဲ့ရတယောကျဖွဈအောငျလို့ ဘယျလောကျအထိ ကွိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာကို အရငျဆုံးပွောပွပေးပါရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကွိုးစားတာတော့ ကွိုးစားရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တျောတျောမြားမြားကတော့ မမေနေဲ့ဖဖေေ ကောငျးလို့ပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီအမရေိကကိုရောကျတာလဲ ကိုယျ့မိဘတှကွေောငျ့ ရောကျတာပါ။ အရငျတုနျးက အိန်ဒိယမှာမှေးတယျ။ အိန်ဒိယမှာပဲ (၁၄) နှဈလောကျ နခေဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကိုရောကျဖို့ မမေတေို့က ကွိုးစားပွီးမှ UN နဲ့ဘာနဲ့ စကားပွောပွီးမှ ဒီကိုရောကျဖို့ သူတို့ချေါခဲ့တယျဆိုတော့ သူတို့ကောငျးလို့ပါပဲ။
မေး ။ ။ ဒါပမေဲ့ West Point ဆိုတာက တကယျ့ကို အထငျကရ စဈတက်ကသိုလျကွီးတခု ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကို ဝငျနိုငျဖို့ဆိုတာ တျောတျောလေးကို မလှယျပါဘူး။ ဘယျလောကျတောငျ ကိုယျကိုယျတိုငျ ကွိုးစားခဲ့ရသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကြောငျးမှာတော့ အမှတျတှဘောတှေ ကောငျးအောငျလို့တော့ လုပျရတယျ။ နောကျပွီးတော့ အားကစားတှေ၊ ဘာတှေ ကစားရတယျ။ ပထမနှဈ High School မှာ ဘောလုံးကနျတယျ။ နောကျဆုံးနှဈမှာတော့ Track ပွေးခုနျပဈလုပျတယျ။ နောကျပွီးတော့ ကြောငျးမှာ အမှတျတှေ (၉၀) ရာခိုငျနှုနျးကြျောရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့။ SAT လညျး အမှတျကောငျးဖို့ လိုပါတယျ။
မေး ။ ။ စောစောကပွောသလို ကမ်ဘာ့အထငျကရ West Point စဈတက်ကသိုလျကွီးမှာ မွနျမာ-အမရေိကနျတယောကျအနနေဲ့ တကျခှငျ့ရတာ ဘယျလောကျထူးခွားတယျလို့ ပွောနိုငျပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောထငျတာကတော့ အရငျစဝငျတုနျးကတော့ အဲဒါတှေ ဘာမှမကွညျ့ပါဘူး။ သူတို့ကွညျ့တာကတော့ အမှတျကောငျးလား၊ မကောငျးလား။ ဒီနိုငျငံကို တကယျခဈြလား၊ မခဈြလား။ အဲဒါတှကေို ကွညျ့ပါတယျ။ အဲဒီလောကျပါပဲ။
မေး ။ ။ ကိုအောငျမိုးအနနေဲ့ ဘယျလိုခံစားရသလဲ။ ကိုယျ့အနနေဲ့ကော ဘယျလိုခံယူသလဲ။ ကိုယျက မွနျမာ-အမရေိကနျတယောကျအနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး တက်ကသိုလျကွီးမှာ တကျခှငျ့ရတာကို ဘယျလိုမြိုး ကိုယျ့အတှကျ ထူးခွားမှုဖွဈသလဲ။
ဖွေ ။ ။ အရမျးပွောပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ပိုကျဆံလဲမပေးရဘူး။ ဘာမှလဲမလုပျရဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီကောလိပျပွီးရငျ စဈတပျထဲမှာ (၅) နှဈ ထမျးဆောငျရမယျ။ အဲဒီဟာကတော့ လူတိုငျးလုပျရတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗမာအနနေဲ့ သှားရတာတော့ ဂုဏျယူပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဗမာတှေ အမြားကွီးမရှိဘူး။ ကနြျောတယျောထဲပဲ။ အဲဒါပွီးတော့ ကနြေျာ့အထကျတနျးကြောငျးကနေ သှားတာလဲ ကနြျောတယောကျထဲပဲ။ အရငျတုနျးကတော့ တယောကျနှဈယောကျ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကွာခဲ့ပါပွီ။ အဲဒီအတှကျ ဂုဏျယူပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ တက်ကသိုလျတကျနတေဲ့ သငျတနျးမှာကော တခွားမွနျမာထဲက မွနျမာ-အမရေိကနျတှပေဲဖွဈဖွဈ၊ မွနျမာထဲကဖွဈဖွဈ တှဖေူ့းလား၊ ဆုံဖူးလားရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ဆုံဖူးပါတယျ။ ဦးသူရအောငျ Major သူရအောငျ သူနဲ့တှဖေူ့းပါတယျ။ သူက West Point အလုပျလုပျပါတယျ။
မေး ။ ။ ဒီတက်ကသိုလျ (၄) နှဈ တကျရတဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေိုလဲ နညျးနညျးပွောပွပေးပါအုံး။ ဘယျလောကျအထိ သငျရတဲ့ဟာတှကေ ကိုယျ့အတှကျ ဘယျလောကျအထိ ခကျခဲသလဲ။ ကိုယျအနနေဲ့ လိုကျနိုငျသလား။ အဲဒီအခွအေနတှေကေို ပွောပွပေးပါ။
ဖွေ ။ ။ တျောတျောမြားမြားတော့ လိုကျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခါတလကွေရငျတော့ တခြို့ဟာတှကေတော့ ခကျတယျ။ တခြို့စာတှကေ ခကျတယျ။ ပထမနှရောသီသှားတုနျးက Training လုပျရတယျ။ အဲဒီတုနျးကလဲ ခကျတော့ခကျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလောကျကွီးလဲ မခကျပါဘူး။ ကိုယျက အားကစားတှေ ဘာတှေ လုပျဖူးတော့ အဲဒီလောကျကွီး မမောပါဘူး။ တခွားမလုပျဘူးတဲ့ လူတှလေောကျတော့ မမောပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မိုးရှာတဲ့အခြိနျမှာ နညျးနညျးခမျြးပါတယျ။ အဲဒီအခါတော့ ကနြျောက နညျးနညျးပိနျတယျဆိုတော့ ပိုပွီးတော့ ပိုခမျြးတယျ။ အဲဒီတခုတညျးပါပဲ မိုးရှာတာကိုတော့ မကွိုကျဘူးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ကြောငျးကိစ်စမှာတော့ တျောတျောမြားမြား လိုကျနိုငျပါတယျ။ မလိုကျနိုငျတာရှိရငျလဲ ဆရာ၊ ဆရာမတှကေ ကူပေးတယျ။ ဒီကြောငျးက အဲဒီအတှကျကောငျးတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကိုယျ့အခနျးထဲမှာ လူက (၁၅) ယောကျလောကျအထိ မကြျောဘူး။ အဲဒီအတှကျ သူတို့ဘာသာသူတို့ ကောငျးကောငျး တယောကျနဲ့တယောကျ စကားပွောလို့ရတယျ။ သူတို့ ကူညီပေးတယျ။ ကိုယျမသိတာရှိခဲ့ရငျ။
မေး ။ ။ နောကျတခုကတော့ ကိုယျက မွနျမာလူမြိုးဖွဈနတေယျ။ ကိုယျ့အသားအရောငျကွောငျ့ သငျတနျးမှာ ခှဲခွားဆကျဆံခံရတာတှေ ကွုံဖူးပါလား။
ဖွေ ။ ။ တခါမှ မကွုံဖူးပါဘူး။
မေး ။ ။ နောကျတခုကတော့ ဒီသငျတနျးတကျတာ (၄) နှဈ စဈတက်ကသိုလျ တကျရတာ - အဲဒီ (၄) နှဈအတှငျးမှာ ကိုယျ့အတှကျ အမှတျရစရာ အဖွဈဆုံး ပွောပွခငျြတာ ဘာရှိပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကနြေျာ့သူငယျခငျြးတှပေါ။ သူတို့ကွောငျ့ ကနြျောက ဒီလေးနှဈလုံးလုံး ပြျောပြျောပါးပါး သှားခဲ့ရတယျ။ ပထမနှဈရောကျပွီးတော့ လကျဝှထေို့းတယျ။ လကျဝှသေ့ငျတနျးမှာ ပါတယျဆိုတော့ သူတို့နဲ့ အမွဲတမျးတှနေ့ရေတယျ။ အဲဒါဆို ကနြျောတို့ Boxing လကျဝှကေ့ တနင်ျလာနကေ့ စနနေအေ့ထိ အမွဲတမျး လကေ့ငျြ့ကွတယျဆိုတော့ သူတို့နဲ့ အမွဲတမျးတှနေ့ရေတယျ။ သူတို့နဲ့ အမွဲတမျးခငျနတေယျ။ အဲဒါဆိုတော့ အဲဒီအခြိနျလေးမှာပဲ ကိုယျက ပြျောစရာရှိတာပေါ့။
မေး ။ ။ စဈသငျတနျးတကျတယျဆိုတာ မလှယျဘူးဆိုတော့ ဒီလိုမြိုး အစကနအေဆုံးအထိ ဘှဲ့ရတဲ့အထိ ကိုယျက စိတျဓါတျခိုငျခိုငျမာမာနဲ့ အောငျမွငျသှားဖို့အတှကျ ပွီးသှားဖို့အတှကျ ဘာအရေးကွီးဆုံး လိုအပျတယျလို့ ကိုအောငျမိုးအနနေဲ့ ပွောခငျြပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါကတော့ ကိုယျ့နဲ့ပဲဆိုငျတာပေါ့။ ကနြေျာ့အတှကျကတော့ ကိုယျ့မိဘတှကေို စိတျခမျြးသာအောငျ ထားခငျြတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျ့အတှကျကောငျးအောငျ လုပျခငျြတယျ။ အဲဒီအရာတှနေဲ့ပဲ သှားခဲ့တာပါ။
မေး ။ ။ ကိုယျက ဒုက်ခသညျဘဝကနေ လာခဲ့တယျဆိုတဲ့ background နဲ့ကော ဆိုငျသလား။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့ ဆိုငျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ခဏလေး အေးတယျခမျြးတယျဆိုတာ ဘာမှမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ဘဝမှာ တခွားဟာတှေ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါတှေ ဖွဈခဲ့တာ ငယျငယျလေးဆိုတော့ ဘာမှကွောကျနစေရာ မဖွဈခဲ့ပါဘူး။ တခုခု မကောငျးတာဖွဈရငျ ခဏလေးပဲ။ တရကျနှဈရကျပွီးသှားရငျ ပွီးသှားပွီ။ The next day isanew day.
မေး ။ ။ ဒီနှဈက တျောတျောလေး ထူးခွားတဲ့နှဈ။ Graduation Ceremony ဘှဲ့ပေးတဲ့ အခမျးအနားက Covid ကွောငျ့မို့ မိသားစုတှေ မတကျနိုငျခဲ့ဘူးပေါ့။ အကုနျလုံး Online ကနေ ကွညျ့ရတယျ။ ကိုအောငျမိုးတို့ဆိုလဲ အရငျတုနျးကလို တယောကျနဲ့တယောကျ နီးနီးကပျကပျ၊ ရငျးရငျးနှီးနှီး ဆကျဆံနရေတာ မဟုတျဘူး။ ခုံခှဲထိုငျရတာအစ ထူးထူးခွားခွား ဖွဈတယျဆိုတော့ အဲဒါကော ဘယျလောကျ ကိုယျ့အတှကျ အမှတျရစရာ ဖွဈမယျလို့ ပွောခငျြလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကိုယျ့မိဘတှေ၊ ကိုယျ့ညီမလေးတို့ မပါတော့ နညျးနညျးတော့ စိတျမကောငျးဘူးပေါ့။ သူတို့အတှကျ ကိုယျက လုပျခဲ့တာဆိုတော့ အဲဒါတော့ တခုမကောငျးဘူးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ဒီလို နောကျဆုံးတခေါကျ တှခှေ့ငျ့ရတာတော့ ပြျောပါတယျ။
မေး ။ ။ နောကျဆုံးတခေါကျ တှခှေ့ငျ့ရတယျဆိုတာ …
ဖွေ ။ ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှခှေ့ငျ့ရတာ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အခုပွီးသှားရငျ တခြို့လူတှကေ ဘယျတော့မှ တှခှေ့ငျ့ရမှာ မဟုတျတော့ဘူးလေ။ ကိုယျနဲ့ခငျတဲ့လူတှကေ Christmas Break တို့ ဘာတို့ကို ခြိနျးလို့ရတယျ။ ဒါပမေဲ့ တျောတျောမြားမြား ကိုယျ့အလုပျနဲ့ကိုယျ အလုပျရှုပျနမှောဆိုတော့ တခါတလကွေရငျ မတှတေ့ော့ဘူးပေါ့။
မေး ။ ။ ဘှဲ့ယူတဲ့အခမျးအနားမှာ သမ်မတဒျေါနယျထရမျ့က သူမိနျ့ခှနျးပွောပါတယျ။ သူမိနျ့ခှနျးပွောသှားတဲ့အထဲမှာ ကိုယျ့အတှကျ မှတျမှတျထငျထငျ ကနျြနတေဲ့ စကား ဘာရှိတယျလို့ ပွောနိုငျပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အမရေိကနျစဈသားက ပထမကမ်ဘာစဈ၊ ဒုတိယကမ်ဘာစဈတှမှော တကယျပါခဲ့တယျ။ The American soldiers have been central to most of the wars. They have been fighting foralong time. အမရေိကနျစဈသားတှကေ ကွာခဲ့ပွီး စဈတိုကျလာခဲ့တာ။ ကနြျောတို့က မြိုးဆကျသဈတှေ new blood ဆိုတော့ သူတို့ရှကေ့ ကောငျးတာလုပျခဲ့တာတှကေို ကိုယျက ပိုကောငျးအောငျဆကျပွီးတော့ လကျဆငျ့ကမျးယူသှားရမယျ။
မေး ။ ။ နောကျဆုံးမေးခငျြတာက ကိုအောငျမိုးအနနေဲ့ စဈသားကောငျးတယောကျ၊ စဈမှုထမျးကောငျးတယောကျဖွဈဖို့ အတှကျက ဘယျလိုမြိုး ကငျြ့ဝတျတှကေို ကငျြ့သုံးရမယျလို့ ခံယူထားပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ ကနြျောတို့ ကြောငျးကဆရာတှေ သငျပေးတာတှကေ ပထမဦးဆုံး Infantry Officer တယောကျအနနေဲ့ ပထမဦးဆုံး လိုတာကတော့ Fitness ကွံ့ခိုငျရမယျ။ ကိုယျခန်ဓာ ကွံ့ခိုငျရမယျ။ စိတျဓါတျပိုငျးဆိုငျရာ ကွံ့ခိုငျရမယျ။ အားကစားတှေ ဘာတှကေတော့ အမွဲလုပျနရေမှာပေါ့။ ပွေးတာတှေ အမွဲပွေးနရေမယျ။ ဝိတျမတာတှေ အမွဲတမျး လုပျနရေမယျ။ ဒါပမေဲ့ the most important thing အရေးအကွီးဆုံးက ကိုယျ့ရဲ့အောကျက ကိုယျနဲ့အတူတူ လုပျနတေဲ့ လူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ကိုယျကကွညျ့နရေမယျ။ တနရောသှားရငျ သူတို့အတှကျ ထမငျးစားစရာ ရှိလား၊ မရှိလား၊ အဝတျအစားတှေ၊ အိပျဖို့ခေါငျးအုံပါလား မပါလား။ အကုနျလုံး စဈနရေမယျ။ သူတို့အတှကျပဲ ကိုယျက လုပျနရေမယျ၊ ကိုယျ့အတှကျ ဘာမှမပါပါဘူး။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ ခေါငျးဆောငျကောငျးတယောကျအနနေဲ့ ရှကေ့နေ ဦးဆောငျပေးဖို့က အရေးကွီးတယျလို့ ပွောခငျြတာပေါ့။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့။
မေး ။ ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ အခုလိုမြိုး အခြိနျပေးပွီး ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးပါ။
ခေတ်ပြောင်းပေမဲ့ အိမ်မပြန်နိုင်သေးတဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည်များ